Pain >>aching>>> Excercise!! ~ စန္ဒကူး
ကျေးဇူး မမကူး.. မော်ဒယ်နဲ့ပြထားတာဆိုတော့ လိုက်လုပ်ရတာလည်း လွယ်သွားတယ်..
model ပါငှားပြီးတင်တာ... စနစ်ကျပါပေ့ဗျား. .. ဒါလဲကုသိုလ်ကြီးတစ်မျိုးပါပဲ... ဝေဒနာခံစားရသူတွေ သက်သာရင်ထပ်ပီး ကုသိုလ်ထပ်ရမယ်... ကောင်းလိုက်လေ
ပိုပြီးအထွန်.တက် တောင်းဆိုလို.ရမယ်ဆိုရင် ဗီဒီယိုကလစ်ပ်လေးနဲ.ဆိုအရမ်းကောင်းမှာဘဲ။
တော်တော်လွန်တဲ.တောင်းဆိုမှုမှန်းတော.သိပါတယ်။ဒါပေမယ်. ကျမလဲ အမလိုဘဲ ဇက်ကြောအနောက်လည်ကုတ်တ၀ိုက်မှာ တင်းတောင်.နေတာ တော်တော်ကြာပြီမို. အမလိုဘဲလေ.ကျင်.ခန်းလုပ်ကိုလုပ်မှရတော.မှာပါ။
ကိုယ်.ဟာကိုလုပ်တာမေ.မေ.သွားမှာသေချာတယ်(ပထမစစလုပ်ချင်းအခါတွေမှာ) ။အဲ.ဒါကြောင်. လေ.ကျင်.ခန်းလုပ်ခါနီးရင် အမဘလော.ဂ်ကိုဖွင်.ပြီးမှ လိုက်ကြည်.ပြီးလုပ်ရမှား)
ပိုစ့်ကို PDF နဲ့ သိမ်းထားလေ။ desktop ပေါ်တင်ထား ပေါ့။
ဒီပုံတွေရအောင် ၄ ရက်လောက်စိတ်ဆိုးချင်ယောင် ဆောင်ပီး ရိုက်ခိုင်းရတာပါ။ ဗီဒီယိုဆို၇င် တစ်သက် စိတ်ဆိုးချင်ယောင်ဆောင်ရမှာ။ အဲဒီမော်ဒယ်က ဈေးကြီးတယ်ရယ်.. ဟီးးဟီးး
အခုမှ မန့်ရတယ် ကိုယ့်ကွန်ဖောက်နေလို့
နော် :) တောင့်တင်းနေတာပဲ ဘော်ဒီလေ :)
ပုံလေးတွေကိုကြည့်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ကြည့်သွားတယ် ကူးရေ..